नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : प्रचण्ड माधवले देउबालाई प्रधानमन्त्री सहित मागे अनुसार दिन तयार भए पछि देउबाको बोली फेरिँदै !
प्रचण्ड माधवले देउबालाई प्रधानमन्त्री सहित मागे अनुसार दिन तयार भए पछि देउबाको बोली फेरिँदै !
पर्वत / नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनाव गराउँछन् भन्ने कुरामा विश्वास नलागेको बताएका छन्। बिहिबार पर्वत शंकर पोखरीमा आयोजित हरिदत्त तिवारीको १८ औं स्मृति सभामा बोल्दै देउवाले प्रजातन्त्रलाई नै खतरा हुने गरी प्रतिनिधि सभा भंग गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले चुनाव नगराउने बताएका हुन् । ओलीको कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएकोले पार्टीले आन्दोलन घोषणा गरेको देउवाको भनाइ छ। सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको मुद्दाबारे सडकमा आन्दोलन गरेर यो गर वा ऊ गर् भन्ने दबाव कांग्रेसले नदिने उनले प्रष्टाए ।प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाखमा चुनाव घोषणा गरेका छन्। तर प्रतिनिधि सभा भंग गरेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
त्यस्तै अहिले आन्दोलनमा सहकार्य गरे निर्वाचन नै हुने अवस्थामा पनि देउवालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रुपमा अघि सारेर गठबन्धन गर्न सकिने अफर गरिएको छ । नेकपाको दुवै पक्षबाट प्राप्त अफरमा देउवाले ‘सिग्नल’ दिइसकेका छैनन् । नेपाल प्रेसका अनुसार यद्यपि संयुक्त आन्दोलन गर्ने प्रस्ताव देउवाले ठाडै इन्कार गरेका थिए । ‘हामी संयुक्त आन्दोलनमा जाँदैनौ । अदालतको आदेश मान्छौं । संसद पुनःस्थापना भए पुनःस्थापित संसदभित्रको सम्भावनाहरु खुला छन् । संसद पुनःस्थापना नभए चुनावको सम्भावना पनि खुल्लै छ’, देउवालाई उधृत गर्दै लेखकले भने ।